Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Gobalka Helmand. – Calamada.com
Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Gobalka Helmand.
Wararka ka imaanaya gobalka Helmand ee Konfurta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay Qarax xoogan uu ka dhacay saldhig weyn oo maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul ay ka sameysteen deegaan ka tirsan degmada Grishka ee gobalka Helmand.
Saldhiga la weeraray waxa uu sigaar ah kaga tirsanyahay deegaanka Seydaan’waxaa qaraxa loo adeegsaday Camaliyad Istish-haadi ah taasi oo khasaara xoogan geysatay.
Camaliyaddan waxaa fuliyay Mujaahid ka tirsan Katiibada Istish-haadiyiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan kaasi oo lagu magacaabo Mulla Lacalla Muxamed waxa uu gaari uu watay bartamaha kala galay saldhigaasi.
Webka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa baahiyay in camaliyaddaasi lagu dilay 25 askari oo ku jira taliyihii saldhigaasi oo lagu magacaabi Jiray Sayid Nabi’waxaa sidoo kale camaliyaddaasi lagu dhaawacay 12 askari oo gabi ahaantooda ah maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan.
Sidoo kale qaraxa Camaliyaddaasi waxa uu burburiyay 7 gaari oo noocyada dagaalka ah oo saldhiga yaalay’waxaa sidoo kale gabi ahaan burburay dhismihii saldhigaasi.
Previous: Askarta Shisheeyaha Oo Gaari Xamuul Ah Rasaaseeyay.
Next: Sawiro: Horumarka Ka Jira Degmada Ufurow Ee Gobalka Baay.